dhimashada Abu Bakr al-Baghdadi ee - uu noqonayaa WAA ka xun hadda? | Apg29
Hogaamiyaha cabsi of IS ayaa lagu dilay weerar US a. Al-Baghdadi ahaa PhD ah ee taariikhda Islaamka kiciyay inuu shuluggii ismiidaamin ah, isaga iyo saddex carruur ah oo uu ku dilay.
terrorörelsen The Muslim LOO ayaa mararka qaarkood la soo jeediyay ka kooban yihiin subag xagjirka jaahil ah markay tixraacayaan Islam iyo Quraanka for xasuuqii ay. Laakiin hogaamiyaha IS ee Abu Bakr al-Baghdadi ayaa PhD ah ee taariikhda Islamic at University Baghdad. Waxa uu, Hadduu qof ogaado waxa Quraanka iyo Islaamka bara - oo isna ma uu ahaa mid gaabis ah in ay ku dhaqmaan.
weerar American habeenkii
Siddeed helicopters ee Maraykanka habeen duulay dhinaca kale ee xadka ee Turkish galay Suuriya oo weeraray bartilmaameed tuulada Barisha ee Idlib shan kiiloomitir u jirta xudduudda.
WAA hogaamiyaha Abu Bakr al-Baghdadi iyo sagaal qof oo kale ayaa lagu dilay weerar ka. Al-Baghdadi dhintay markii uu kiciyay inuu shuluggii ismiidaamin ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaqiijiyay in Abu Bakr al-Baghdadi ayaa lagu dilay weerar. Hogaamiyaha argagixiso waxaa loo eryi galay tunnel ah halkaas oo uu isku qarxiyey iyo saddex carruur ah oo uu la dilaa . Inkasta oo laba ka mid ah naagihiisiina wuxuu yahay inay ku dhinteen weerarka.
Madaxweynaha wuxuu ka hadlay shir jaraa'id oo ku saabsan dadka oo dhan oo ay yihiin dhibanayaal of IS ku baaqaya gowraco. Wuxuu waxyaabo ay ka mid kiciyey, wariye Maraykanka James Foley ahaa madaxa ka gooyay on filimada iyo tijaabo ah Jordan oo la gubay nool qafas.
Terror Kaxaynta duullaankii ku daatay
Waxa uu ahaa al-Baghdadi sidii xagaaga 2014 naadiyey Islamic State midowga ee Suuriya iyo Ciraaq, duullaankii lagu hoobtay dhaqdhaqaaqa argagixisada ah ee, taas oo ay ka qaaday in ka badan, ka mid ah waxyaalaha kale Raqqah ee Suuriya iyo magaalada labaad ee ugu weyn Ciraaq ee Mosul.
Kumanaan yazidier dilay Daacish iyo 7000 gabdhaha iyo dumarka loo qaaday sidii addoommo jinsi ah. Masiixiyiin badan ayaa sidoo kale lagu dilay by LOO off madaxooda mindiyo jarida. Waxaa jira video of this.
In May 2019 loo arkaa dhaqdhaqaaqa argagixisada in adkaaday markii ciidamada SDF Kurdish-hogaaminayo reebtay WAA in ay dhufayska ugu dambeeyey - al-Baghuz. Taliyaha SDF Mazlum Kobanî ku dhawaaqay in uu adkaaday waxay WAA.
nin ugu khatarta badan dunida ee
Abu Bakr al-Baghdadi ayaa loo arkaa nin ugu khatarta badan dunida ee, laakiin haatan wuu dhintay. Waxa uu hore u sheegay in uu lagu dilay dagaalka, laakiinse haatan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump xaqiijiyay inuu dhintay.
The terrorörelsen Muslim ayaa mararka qaarkood sheegtay inuu yahay wax baran subag xagjirka Muslim ah markay tixraacayaan Islam iyo Quraanka for xasuuqii ay. Laakiin hogaamiyaha IS ee Abu Bakr al-Baghdadi dhab ahaan ma ahayn wax baran. Waxa uu leeyahay PhD ah ee taariikhda Islamic at University Baghdad. Waxa uu, Hadduu qof ogaado waxa Quraanka iyo Islaamka bara - oo isna ma uu ahaa mid gaabis ah in ay ku dhaqmaan.
Waxaa intaa dheer, waxa uu mararka qaar la soo jeediyay in kuwa ay mas'uul ka ahaayeen xasuuqii kuwaas oo aan Muslimiin. Waxayna raaceen Quraanka iyo Islam ee Qorniinka in warqaddii.
Noqonayaa mid ka sii xun WAA hadda?
Ka dib dhimashadii IS-hoggaamiye ayaa aaminsan yihiin cilmi-argagixisada, Magnus Ranstorp dhaqdhaqaaqa argagixisada doonaa dib-u-ah sida "WAA 3.0" . IS waxaa adkaaday laakiin waxaa laga yaabaa unugyada argaggixisada kala duwan sii, ma ugu yaraan in Europe. Dhaqdhaqaaqa heli doonaa ka xun hadda in Europe? Fikradaha khilafada ah ayaa kiis kasta lagu tuuri.
Dadka u baahan tahay Ciise
Dadka maanta u baahan yihiin in ka badan abid, Ciise Masiix. Muslimiinta, Yuhuudda iyo kuwa aan Yuhuudda ahayn u baahan Ciise. Waxaa keliya oo isaga iyo mid kale ma jiro, kuwaas oo ay ku badbaadin karto. No xasuuqii Muslim by ICE fuliyay badbaadin karo. mana ay toona dadka kale.
Sidaa darteed, iyaga iyo dadka kale oo dhan ay aqbalaan Ciise. Helo rumaysadka xagga Ciise waa la badbaadin doonaa by nimcada Ilaah, sababtoo ah Ciise wuxuu u dhintay dembiyadeenna oo u sara kacay oo maalinta saddexaad.